Fincilli ummataa Itoophiyaa raasaa jira, jedha Reuters - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Fincilli ummataa Itoophiyaa raasaa jira, jedha Reuters
Fincilli ummataa Itoophiyaa raasaa jira, jedha Reuters
Ummanni yakka Bishooftutti raawwatamee fi badii Oromoo irratti yeroo dheeraadhaaf hojjatameen dallanee kaka’uudhaan fincila guutuu biyyattii woliin dhaye geggeessaa jiraachuu Reuters gabaase. Dallansuun ummataa gubatiinsa worshaalee hedduuf sababa ta’eera. Worshaaleen qabeenya kubbaniyaa Woyyaanee fi biyyoota alaa ta’an irratti tankaarfiin cimaan fudhatamaara. Akka gabaasa Reuters itti warshaalee fi konkolaatonni kubbaaniyaa biyya Turkii, Dangootee fi kannin biroo irra ibiddaan hubaatiin guddaan gayee jira. Guutuun gabaasa Reuters isa asii gadiiti>>>
ummata ireecha irratti ajjeefame
Previous articleWorraaqsi bilisummaa Oromiyaa keessa babal’ataa fi qabeenni Woyyaanee Qeerroo Oromoon gubataa jira
Next articleGodina Arsii Lixaatti poolisoonnii fi hidhattoonni qawwee hiikkataa manguddotti kennaa jiru